ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အောင်မြင်မှုဆီသို့ပို့စ်တင်ပါ Martech Zone
Pagemodo ကနေဒီအချက်အလက်အချက်အလက်ကိုနားလည်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အောင်မြင်မှုအတွက်သင်၏လမ်းကိုတင်ပါ, အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာ, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများမဟုတ်သည့်အခါ post ရန်အခွင့်အလမ်းကိုဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်နိဂုံးချုပ်။ ငါငြီးငွေ့ကြီးထွားလာတယ် တင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန် အနတ္တ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်လိုလျှင် မျက်လုံးအရေအတွက်လိုက်ဖမ်းရပ်တန့် အလားအလာပိုများသည့်နေရာများကိုစတင်အာရုံစူးစိုက်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်။
အလွန်ကောင်းသောဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာ၏အဓိကသော့ချက်မှာအကြိုက်ဆုံး၊ မှတ်ချက်နှင့်အစုရှယ်ယာအများဆုံးရရှိရန်အတွက်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်တင်ရမည်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာသင့်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အချိန်များစွာမဖြုန်းတီးရန်ကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်ပြီးသောနည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
Tags: Facebook ကပုဂံတိုင်
Bugsnag: Real-Time အမှားသတင်းပို့ခြင်း
ဇွန် 8, 2013 မှာ 7: 07 pm တွင်
Great graphic from Pagemodo 🙂
ဇွန် 12, 2013 မှာ 3: 26 pm တွင်
ဇွန်လ 13 ရက် 2013 ခုနှစ် နံနက်3နာရီ 46 မိနစ်
Your infographic explains well.that’s why i like it.
ဇွန်လ 10 ရက် 2013 ခုနှစ် နံနက်2နာရီ 50 မိနစ်
Summed it up brilliantly Doug. It’s remarkable how poorly Facebook pages are used byalot of companies, and charities in particular. A great shame as without facebook being used well, it tends to beawaste of time.
Thank you for reviewing our Infographic!